TOOSHKA PTIMES: Madaxda Puntland ee maanta oo haysta Fursad muhiim kuna saabsan Xoreynta Sool, maka faa’iideysan doonaan Mise?? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Masuul ka tirsan xisbiga UCID oo fashiliyey siraha Muuse Biixi & Arin aanan la filayn oo banaanka timid 2 hours ago
Home 2018 July W.Gudaha, Wararka Maanta TOOSHKA PTIMES: Madaxda Puntland ee maanta oo haysta Fursad muhiim kuna saabsan Xoreynta Sool, maka faa’iideysan doonaan Mise??
TOOSHKA PTIMES: Madaxda Puntland ee maanta oo haysta Fursad muhiim kuna saabsan Xoreynta Sool, maka faa’iideysan doonaan Mise??
July 7, 2018 |by W LAASCAANO| 2
GAROOWE(P-TIMES) – 7 bilood oo buuxda ayaa kasoo wareegtay markii ay Somaliland u durbaan tuntay dagaal toos ah oo ay ku qaado Puntland, waxayna ka bilowday Tukaraq oo ay ciidamadeedu qabsaden 08 January 2018, taasi waxay keentay ama soo dadajisay in ay Puntland sameyso abaabul dhinac walba saameeyey, gaarayna heerkii ugu sareeyey oo ay ku doonaysay in ay dib gacanteeda ugu soo celiso gobalka Sool.
15kii ilaa 24-tii May Dagaalo culus ayaa dhexmaray Puntland & Somaliland, wixii intaas ka dambeeyey abaabul dheer ayay aadeen labada maamul, waxay wajaheen marxalado kala duwan, dagaalkuna wuu ka gudbay Hanjabaadaha iyo hadalada dagaal, wuxuuna gaaray mid u daadaga in qiyamka iyo Aqlaaqdaba laga gudbo.
Si aan horey loo arag ayay Midnimo & go’aan wadajir ah u muujiyeen Shacabka gobalka Sool ee Puntland kunool, kuwaas oo 11-kii sanno ee lasoo dhaafay gacanta ugu jiray badankooda maamulka Somaliland, waxayna cadeeyeen mawqifkooda ku aadan sidda ay uga go’an tahay in ay taageeran Howlgal dib looga saarayo gobalkaas maamulka Hargeysa.
Deegaano aysan horey u gaarin adeegyada rasmiga ah ee dawladda iyo wararkeedaba ayay gaartay Duufaanta Colaaddan, waxayna Shacabku dareemeen in uu jiro qorshe dhameystiran oo ay dawladda Puntland hadda ka leedahay soo celinta Laascaanood.
Falanqeeyaasha sidda dhaw ula socda arrimaha gobalka ayaa rumeysan in Puntland ay hadda soo wajahday fursad dahabi ah oo u muuqan karta tii ugu dambeysay oo ay dib gacanteeda ugu soo celin karto dhulka laga haysto, gaar ahaana magaalooyinka laamiga iyo kuwa ka dagsanba.
Somaliland waxay beel-dareysay siyaasaddeedii ku aadaneyd gobalada Sool, Sanaag & Cayn, ka dib markii ay doorteen Shacabka Gobalada Waqooyi Muuse Biixi Cabdi oo ahaa Horjooge dagaal, horeyna xasuuqyo uga geystay gudaha Somaliland, ayna shacabka SSC u arkeen in uu yahay mid colaad huris ah.
DAAWO: Shacabka Deegaanada Sarmaanyo & Awr-Boogeys oo laga taageeray Howlgalka Xoreynta Laascaanood, Fariina u soo diray M/weyne Gaas
Hadalada Isir-naceybka ee kasoo yeeraya Afka Muuse Biixi Cabdi, waxay kiciyeen Laabta Wadaniyiinta gobalka Sool, waxayna dib u xasuusiyeen dharaarihii Daraawiisheed iyo sidda ay ugu diyaarsan yihiin in ay gobalkooda ka saaraan maamulka Jeegaanta.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadda haysta taageerada ugu badan ee Shacabka Puntland, ayaa markale helay taageero aysan waqtigan oo kale heli jirin madaxda xilka haysa, maadaama mudo xileedkiisa ay ka dhiman yihiin bilo kooban, haddana maanta haysta taageerada ugu badan ee dadka Puntland.
DAAWO: Shacabka Puntland ee kunool Garoowe & Gaalkacyo oo fariin Argagax leh u diray M/weynaha Somaliland
DAAWO: Shacabka Degmooyinka Taleex, Carooley, Burcadle iyo Holol oo Xoolihii ugu badnaa gaarsiisay Ciidamada Difaaca ee Jiidaha G Sool.
DAAWO: Isimadda Gobalada SSC oo si rasmi ah ugu dhawaaqay qaraarkii ugu adkaa oo kusaabsan Dagaalka Tukaraq, shirna ku yeeshay Buuhoodle.
DEG DEG+DAAWO: Banaanbax ka dhan ah S/Land oo ka dhacay Laascaano & Shacabka oo Fariin u soo diray M/weyne Gaas
Madaxda Puntland ee maanta waxaa la gudboon in uusan ka labo-labeyn qaraarka dib u soo celinta gobalka Sool, isla markaasna uu wajaho sidii Shacabka Laascaano maalmaha Ciidka uu kula tukan lahaa Masaajidyada ama Barxadda Salaada Ciidda, taas oo ay naawilayaan Shacabka magaaladaas.
Waa markii ugu horeysay oo shacabka gobalada Sool & Cayn ugu midoobaan sidii Somaliland looga saari lahaa dhulka Puntland ee gobalka Sool, waxaana muuqatay in ay garowsadeen xaqiiqada loo socday oo ay dib ugu soo laabanayaan deegaanadooda.
2 thoughts on “TOOSHKA PTIMES: Madaxda Puntland ee maanta oo haysta Fursad muhiim kuna saabsan Xoreynta Sool, maka faa’iideysan doonaan Mise??”
Halgan July 8, 2018 at 7:06 am · Edit
Kama faa idaysan doonaan waayo maxweynayaal walba oo puntland ma gaalo horleh baa laga qabsadaa markasuu xilka katagaa asagoo leh waxbaan xorayn jaaniska ugu wayn wuxuu soo maray Gaas iyo cameey. Laakiin BAAQ mooyee wax kale mahayaan ciidanka diyaara. Tageen ada shacabka oo diyaara. Qurbajoogta oo diyaara dhulahantaha oo diyaara bay hadal iyo hanja baad hayaan. Waxaanse filayaa inta waxaas wadan. Baa aduunku khasbikartaan.dhulbahante doonaa wayna ogalaan in yoocada ay yimaadaba wuxuushta jegaanta. Sanadkan waa sanadka ugu jilicsan ay een laakiin puntland 7 bilood tukaraq madha fan. Waxaan filayaa I’m ciidanka iyo shacabka puntland ku caajiseen. Siyaada puntland dhul ay xoreeyaan iskafaaye in yoocada yimaadan. Ogaada. Yaacada hadii kayimaada aduunku wuxuu oran ka lajooga meeshiina. Taasaa waa taariikhxumada harti. Iyo jilicsan aanta maamulka iyo garoowe oo lasoo duldagaan caasimada na madfac laga soo tuuray yoocada. In shacabka qaxaan. GAAS IYO CAMEEY NA ISKA TAGAAN. HALKAAS A. NOQOTA XORAYN LAWAAYO IYO DOORASHADEEDA DHACDA. LAGUNA KALATAGA PUNTLAND WAA YO MINDI INTAY AFLEEDAHAY BAY WAXGOOYSAA.
Wax Garad July 8, 2018 at 11:53 am · Edit
Isdejiya waaqwaaq looma baahna iska noolaada Yoocadana waa la joogaa hadaad mooday in laga maqanyey calanka dowlada barakaysan baa ka taagan ,ciidanka soomajeestayaasha qaranka somaliland ayaa jooga garoowe dariswanaag reer badhi badhi joojiya gariirka iyo bashbashta, cid wax idinyeelaysaa ma jirto waad ogtihiin sadex maxbuus baad haysataan halka aan boqol iyo sideed iyo sodon maxbuus aan kaaga hayo laba dagaal oo dhacay saacado gudahood iyo ii gaadhi oo tigniko ah iyo todoba aan ka gubay halka aad gaadhi beebee ah oo dhiidhi galay taayirna ka ban jaray aad ku faanteen doqoniimadiina balse saacado gudahood markii aad indhihiina wax ku aragteen aad oydeen oo ilmadu idinka qubatay, marrkaa dagaal ninkii yaqaanaa kuma degdego mana yidhaahdo weerar aan qaadno gaar ahaan libaaxa geska afrika ciidanka qaranka laguma soo degdego.